Queen Elizabeth II oo furtay xarunta BBC - BBC Somali - Warar
Queen Elizabeth II oo furtay xarunta BBC
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 June, 2013, 11:32 GMT 14:32 SGA
Boqoradda Britain, Queen Elizabeth, ayaa rasmi ahaan u furtay xarunta BBC-da ee bartamaha London - oo ah guriga Broadcasting House ee dib u dhiska casriga ah lagu sameeyay.
Boqoraddu waxay ku soo wareegtay qaybaha kala duwan ee BBC-da iyadoo ay wehliyaan madaxda sare ee hay'adda iyo kuwa laamaha kala duwan, waxayna la kulantay weriyeyaasha, soo saarayaasha barnaamijyada iyo shaqaalaha BBC-da ee halkaas ka hawl gala.
khudbad toos ah ayay boqoraddu idaacadda radio-ga BBC-da uga jeedisay ummaadda ku dhaqan dalka UK.
Boqoraddu waxay wadataa hawlaheeda rasmiga ah iyadoo seygeeda, Prince Philip, isbitaal lagaga sameynayo qalliin caloosha ah magaalada London.
Amiirka, oo maalinta Isniinta ee soo socota da'diisu noqonayso 92 jir, waxaa la filayaa inuu isbitaalka ku jiro muddo labo toddobaad ah. Waa markii afaraad ee isbitaal uu galo muddo 18 bilood gudahood ah.
Xaruntan oo lagu tilmaamo tan ugu weyn guri warbaahineed ee adduunka luuqado kala duwan laga sii daayo, waxaa ka hawl gala qaybaha BBC-da ee Terlevision-ka, Radio-ga iyo Online-ka ee gudaha iyo dibadda intaba la hadla. waxayna BBC-du u soo guurtay horraantii sanadkii 2012.